La Compagnie dia mandefa serivisy helikoptera mivantana vaovao eo amin'i Nice sy Monaco
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » La Compagnie dia mandefa serivisy helikoptera mivantana vaovao eo amin'i Nice sy Monaco
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao lafo vidy • Vaovao Mafana Monaco • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny fitsangatsanganana amin'ny French Riviera dia azo tratrarina kokoa noho ny hatramin'izay noho ny orinasam-pandraharahana rehetra. La Compagnie. Tamin'ny volana Mey 2019, ny zotram-piaramanidina butik dia nanangana làlana fizaran-taona vaovao eo anelanelan'ny New York sy Nice, izay manolotra fidirana mivantana mankany atsimon'i Frantsa mandritra ny vanim-potoana voalohany. Ho fankasitrahana ny zotram-pianarana vaovao, nametraka fiaraha-miasa amin'ny orinasam-by angovo Monegasque, Monacair, ny seranam-piaramanidina, manome fifandraisana haingana sy tsy misy tohiny ho an'ireo mpandeha ho any Monaco.
Tao anatin'ny 7 minitra monja - saika haingana loatra mba hankafizana - ny mpandeha dia afaka manidina eo anelanelan'ny seranam-piara-manidina Nice Côte d'Azur (NCE) sy Monaco Heliport (MCM), hisorohana ny famindrana lalana be loatra. Ireo mpandeha dia manidina amin'ny helikoptera Airbus H130 vaovao, miaraka amina seza ho an'ny mpandeha enina amin'ny fiononana amin'ny rivotra sy efitrano fidiovana fanampiny azo amidy. Io no fomba mety indrindra ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra - na mpizaha tany rehetra - hanatsarana ny fijanonany ao amin'ny Principality of Monaco, miaraka amin'ny fiarovana an-dalambe ary 1.5 ora sisa no ilaina alohan'ny hiaingan'ny fiaramanidina any Nice. Ny helipadan'ny Monacair ao Nice dia eo akaikin'ny vavahady La Compagnie ihany koa ho an'ny famindrana milamina sy tsy misy fihenjanana mankany sy avy amin'ny fiaramanidina.
Ny fiaraha-miasa vaovao dia manolotra serivisy fidinana sy fidiana ho an'ny minivan VIP maimaim-poana ihany koa ho an'ny sidina La Compagnie rehetra na avy any Monaco. Miaraka amin'ny fanamorana ny famandrihana tokana amin'ny alàlan'ny La Compagnie, ny saran-dalan'ny mpandeha helikoptera tokana eo anelanelan'ny Nice sy Monaco dia $ 170 USD; vidiny isaky ny mpandeha amin'ny sidina mandroso dia $ 300 USD.
Niorina tamin'ny taona 1988 avy amin'i Stefano Casiraghi, Monacair dia misahana manokana amin'ny serivisy avo lenta sy noforonina ho azy, ary izy no mpisolo toerana ofisialy ny fitaterana angidimby ho an'ny HSH Albert II, Prince of Monaco. Miorina ao amin'ny Monaco Heliport, ny orinasa dia niasa sidina 50 mahery isan'andro nifanaovan'i Nice sy Monaco nanomboka ny taona 2016.
"Faly izahay hiara-hiasa amin'ny orinasa angidimby malaza, Monacair, izay nampiaiky volana anay ny traikefany lalina tamin'ny fitaterana VIP ary koa ny fahazoany ny mpandeha lavitra," hoy i Jean Charles Périno, filoha lefitra misahana ny varotra sy ny marketing ho an'ny La Compagnie. "Ity serivisy vaovao ity dia manolotra tontolo iray ahazoana aina sy azo itokisana ho an'ny mpandeha eto amintsika - ary izany no atao hoe rendrarendra ankehitriny."